Petersburg - kungcono impela idolobha romantic kakhulu. Its izakhiwo zasendulo, cityscapes, sengathi eyabhalwa umbala amanzi emvula, izindawo zomlando, ukukhumbula izenzakalo zesikhathi esidlule, omangalisayo zasebukhosini futhi izigodi yizicukuthwane - konke Petersburg kuletha isimo romantic. Akumangalisi ukuthi lokhu lapho kukhona esinjalo yokudlela nenhle ngokuthi "La Moore." Yebo, namuhla sizoxoxa ngokuningiliziwe ngale ndawo!
I romantic kakhulu isikhungo Culinary
Indawo yokudlela "La Moore" ngesikhathi metro station "Pioneer" Kubonakala sengathi bavela ngifaka XVIII leminyaka. Akumangalisi yokudlela lidumile Petersburg izivakashi. Futhi akusiyo nje ukusondela ukuba ngesitimela, kodwa futhi iqiniso lokuthi yokudlela unedumela njengoba kunawo futhi romantic kakhulu emzini.
Kube ngokuvamile kwenzeka imikhosi ehlukahlukene ehlobene emcimbini wedding nokuzibandakanya. Futhi, kukhona nice kakhulu, ungenza isicelo somshado. Imibala iyashintsha iyaphupha ibe wezangaphakathi isitayela isiFulentshi, sizungezwe eyinkimbinkimbi ifenisha intombazane uyozizwa like a princess, futhi owenza ukunikezwa, okungenani, isikhulu.
Ukubuyela design ingaphakathi izixazululo, sisuke sithi endaweni ezifana yokudlela "La Moore," kukhona ezintathu amahholo ezinobukhulu obuhlukahlukene, okuyinto zitholakala sesibili. Ngamunye emakamelweni has isitayela ayo, iqukethe eziningi ezahlukene abantu yakhelwe izenzakalo zonke izinhlobo.
Igumbi Lavender kuyahluka endaweni nesizotha futhi angazamukela kuze kube izivakashi nesishiyagalombili. Kuyinto engcono yokuqhubela imihlangano futhi mkhosi limile wasondelana nabo ngokukhethekile. Wonke umuntu kuleli gumbi kwakha umuzwa induduzo yothando. umbala Lavender ekuklanyweni, Indwangu ocingweni lokuzenzela, imihlobiso - yonke imininingwane wacabanga, kodwa lutho ngeke zikuphazamise into ebaluleke kakhulu - ukuthi wenzani lapha.
Ikamelo olandelayo yokudlela ibizwa ngokuthi "Emerald". It angazamukela abantu amane. Design Its - a French Provencal isitayela, futhi egumbini ngokuvamile, efana zokudlela amancane emikhaya eFrance.
Umhlangano omkhulu kunayo yonke - futhi wanelise yimikhuba - kungcono zemabula ihholo esitezi sesibili. Kuyo, ungakwazi oda ukugubha nenombolo izihambeli phezulu abantu 200. Ehholo we kuphela ocebile kodwa nenhle - zemabula iphansi, stucco, usebenzile yensimbi ifenisha, amakholomu kanye balustrades, izibani ezilengayo ezibizayo nendwangu okunethezeka. Ulandisa umhlobiso kwezigodlo French kwekhulu XVIII, kungani kunokuhlupheka ngokuvamile ngathenga lomshado.
ezakheke round kufana egumbini ballrooms. A wedding lapha uyoba njengomvini ibhola magic, izinkumbulo okusalayo isikhathi eside.
Umqondo onjalo isikhungo njengoba yokudlela "La Moore" ( "Pioneer" metro station), kufaka inombolo enkulu amadili kuhlanganise iIgama (kusukwe). Uhlu izitsha kanye iziphuzo kuleli cala - futhi kuyingxenye ebalulekile nokuhlanganyela kulelo holide.
Ngo "La Moore" has a ekhethekile idili imenyu ikhadi, lapho imininingwane, kuhlanganise nenani amagremu umuntu ngamunye, zaveza zonke izikhundla. Okunye ukudla kwakhona angabona ukuthi uphuma njani ongakhetha eziningana. Ngokwesibonelo, ukukhonza izinhlobo eziningana izitsha ezibandayo: inyama, inhlanzi nemifino ukusikeka, inhlanzi no inyama aspic.
Of izinhlobo kweshumi salads, emelelwe kwimenyu, ungakhetha ezintathu ukuthi kuyoba etafuleni edilini. Nansi "Olivier" "uKhesari", "Herring ngaphansi noboya coat," brand "La Moore" kanye nabanye abaningi. Ukwakheka kwabo ngesineke ngokucophelela, ukuze ukwazi ukukhetha, eqondiswa ukunambitheka yakho siqu kanye nezincomo izivakashi zayo.
French cuisine, ekhaya-isitayela
Ungadla Of hot uphiwa umkami kukhethwa inkukhu noma mushroom. Kusukela uhlu izitsha main ashisayo ukukhetha omunye umuntu oyedwa. Kungaba kokubili inyama kanye nenhlanzi.
Imenyu has frushe ka walleye futhi trout, emaphaketheni ezazigxishwe inyama yengulube, salmon kubhakwa, ingulube kanye inkukhu broshet, izindondo yengulube futhi eyayigcwele inkukhu webele. Zonke izitsha ashisayo uzilungiselele ngokusho zokupheka French. Kusukela umuntu akhethiwe njengoba garnishes. Lokhu kungaba amazambane, ubhontshisi noma ukholifulawa. Enkulu isixazululo Culinary elenza yimuphi umshado - amazambane ngesimo rose ngokuthi "Duchess".
"La Moore" - indawo yokudlela, idili imenyu ecatshangwe futhi acabangele okuthandwa ezinkulu izethameli izikhungo. Lunye isikhungo kuchaziwe - cuisine European futhi isiRashiya, okuyizinto ekhaya-eyenziwe labapheki professional. Futhi abhake izinkwa zawo siqu in the restaurant.
Bezikhungo isikhungo has yokupaka, futhi yokudlela iseduze metro station "Pioneer", okwenza indawo esilungele ukuhamba izivakashi, futhi Ukufika ngemoto. Indawo yokudlela ikakhulukazi elula ezakhamuzini izifunda enyakatho Petersburg.
"La Moore" - yokudlela (Petersburg), okuyinto ethandwa kakhulu imishado. Isayithi ubeka kukhona igalari lonke elalinikezelwe imikhosi, okuyinto lugujwa lapha. Lokhu akusona isimanga, ngoba enjalo amakamelo ezihlotshiswe kahle ukwenza izithombe ezinhle kakhulu futhi zonke izimenywa uyozizwa sengathi ibhola French.
ukwamukela izihambi okungavamile
Kusayithi kukhona Izibuyekezo mayelana nezindawo aphethwe e "La Moore" imikhosi. Ngokuvamile izivakashi imikhosi ujabule, kodwa ngezinye izikhathi zenza akhononde yokuthi uma into kuyalwa emva iholidi kuqedile, kufanele ukhokhe intengo ohlwini.
Ngokwesibonelo, unquma ukuphuza itiye emva esidayisa nje otgremevshego. Ukuze itiye wena, yebo, kufanele ukhokhe, ngoba kwakungeyona ingxenye imenyu idili, okuyinto ngempela kuyiqiniso, nakuba kungebona bonke amakhasimende izikhungo ucabanga ngakho, ngicabanga ukuthi kulokhu ekuphathweni kungaba nice to meet futhi ukukhonza itiye njengesipho kusukela isikhungo .
Ephawula ukugubha endaweni njengendawo yokudlela "La Moore", phakathi kwezinye izinto, ungakwazi oda umculo bukhoma ukuthi ziyohambisana umcimbi. Lokhu yikona okuvame ukukhumbuleka isikhathi amakhasimende e ukubuyekeza kuwebhusayithi yokudlela sika. Futhi qaphela ukwamukela izihambi okungavamile, cuisine esiphundu, abasebenzi nomusa.
A lomshado at yokudlela "La Moore" uthole emnandi. It wagomela amakhasimende e kuzibuyekezo zabo, zazo zingafundwa njengoba website esemthethweni izikhungo kuzinto ekhethekile ku-intanethi. Ngokuvamile, wayala idili lomshado lapha uqaphele ukuthi kungenzeka ukuba bahlanganyele umhlobiso ihholo, isibonelo, ukuhlobisa Balloons ezitebhisini. Ezinye izindaba zika-ukudla idili omthemba zihambisana ne, ngakho abakwazi ukhathazeke imali wachitha.
Idili e "La Moore" izobiza esifundeni ruble 1500-2000 umuntu ngamunye. Akuve yeningi, banikezwe amanani Petersburg.
Abaningi izivakashi zihlukaniswe ukubukwa ukuthi iholide e "La Moore" iqala endaweni yokwamukela izivakashi. Lapho, ngasendleleni, kuyinto ikhabethe. Lounge futhi sigqoka Igumbi - ngokuphelele emhlophe, ehlotshiswe ezibaziweyo iphethini ekhandiwe ukuthi sifana lace esihle.
Ifenisha e yokudlela, ngasendleleni, libuye elihlotshiswe izakhi kwachuma kokuba umbala omhlophe. Interior isikhungo kwenza ukuthi umuntu ukugubha ngaphambi kokuqala holidi, okwenza izivakashi ngokushesha kushintshwe fashion oyifunayo.
"La Moore" - yokudlela (Petersburg), okuyinto libuyekeza zivame ezigcwele ukubonga abasebenzi ophethe imikhosi ngezimali. isikhungo amakhasimende bayahlonishwa Ambience okuzothileyo, imenyu ekhaya, Igumbi umhlobiso nisondele izivakashi.
Ngokuphathelene amakheli yokudlela okungukuthi ukuthi kungenxa Avenue Ispytateley 4/1 (metro station "Pioneer").
Ephawula iholidi endaweni enjalo, njengendawo yokudlela "La Moore," kuphawula izivakashi ukushiya ikakhulukazi omuhle, kodwa ezinye ukuhlala ingane yakho ingajabule iqiniso lokuthi kophudingi, izithelo, utshwala ikhekhe lomshado kumele uze bebodwa. By the way, izimbali ezokwenza ukuhlobisa amatafula kanye igumbi futhi efiselekayo ukuthatha nabo.
Kodwa into iningi izivakashi weneliseka itafula idili, ngoba ekuqaleni kubonakala sengathi ukudla akwanele ngazo zonke, bese kuvela ukuthi yayisalokhu. Yiqiniso, umzuzwana enhle.
Futhi, izivakashi eziningi kanje yokudlela, lapha ungakwazi ukugubha ukunqoba kwakhe njengoba nje nawe ufuna, ngoba yokudlela akusho ukuthi abeke umculo imbali yakhe imihlobiso. Lokhu, kuhlanganisa ukubona abantu abathanda iqhaza ekuhleleni umcimbi wabo siqu.
Perfect isikhala lomshado
Ngokusho amakhasimende amaningi ezindaweni luqondane ku yokuthi kuba yokupaka elula kakhulu futhi izisebenzi ingenye ukuthi uzokwenza konke ukwenza iholide lalingene par.
Ukuze umshado omuhle kubalulekile kakhulu maphakathi egumbini, lapho celebration itawugujwa. Marble ehholo yokudlela "La Moore" - kulesi sici iyona ofanele kakhulu lomshado (njengoba bonke abantu abavumayo, wayala-ke kukhona). Ngokuthi igumbi is banzi nge stylish ingaphakathi abaqhoshayo kudala umqondo walokho okushiwo ukugubha senzeka esigodlweni.
Ungasebenzisa kuphela ongakhetha kuzo imenyu izitsha aseYurophu, futhi kungenziwa imenyu Russian ngokuphelele - konke kuncike isihloko lomshado. Nakuba Interiors ahlotshiswe ikakhulu isitayela isiFulentshi, izitsha Russian kungahlali kahle lapha, ikakhulukazi njengoba Izicukuthwane Russian ubelokhu ohlonishwayo isiko French.
Izivakashi ukuthi umema bani a celebration yokudlela "La Moore", uzobe bajabula ngokukhululwa ubuhle Interiors, cuisine esiphundu, a smiling futhi enobungane abasebenzi, ikhumbula zonke izifiso zabo.
Kungakhathaliseki isihloko iholide lakho, uma ukuwethamela yokudlela "La Moore", uyobe nakanjani uzophumelela. Izivakashi zakho amazwe bayohlale bemkhumbula umuzwa eziye babevakashela ibhola wasebukhosini.
Ngakho, uma ufuna isikhathi eside ukukhumbula ekugubheni isenzakalo esibalulekile empilweni yakho, zithokozise atewugubha e yokudlela "La Moore." Holiday, imakwe lapha izohlala hhayi kuphela ezithombeni kodwa futhi izinhliziyo izivakashi zakho. Awu, ungeke uyikhohlwe lolu suku wake empilweni yami.
Jabulela iholidi lakho futhi ajabule!
Surfactants: ulwazi olujwayelekile
I-Metis ne-metiscus bangabantu "beklasi yesibili" noma abantu abaqhakazile, abaphumelelayo?